I-Fiber Optic Termination Box Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Fibre Optic Termination Box Factory
Fibre optic ukuqedwa ibhokisi okunye okubizwa fibre optic ukuphela ibhokisi iyidivayisi ukuphela fibre optic ikhebula, omunye umkhawulo ikhebula optical kanti omunye umsila we-fiber optic. Amabhokisi wokuqedwa kwe-fiber optic alungele ukuhlanganisa ikhebula le-fiber optic ne-pigtail, linikeza izindlu eziphephile neziphephile ezivikela izinhlayiya ze-fiber optic futhi zivumela ukuhlolwa nokusatshalaliswa okulula kwinethiwekhi yokuxhumana ye-FTTx.
Ibhokisi lokusabalalisa leJera lenziwa ngokwamabanga wokuvikela we-IP, avumela amabhokisi asetshenziswe ngaphakathi nangaphandle. Isetshenziswa njengendawo yokunqamula ikhebula le-feeder ukuxhuma ngekhebula lokudonsa kuhlelo lwenethiwekhi yokuxhumana ye-FTTx. Ukusikwa kwe-fiber, ukuhlukaniswa, ukusatshalaliswa kungenziwa kuleli bhokisi, futhi okwamanje kunikeza ukuvikelwa okuqinile nokuphathwa kwesakhiwo senethiwekhi ye-FTTx.
Izinhlobo ezahlukahlukene zamabhokisi wokusabalalisa we-fiber optic ahlukaniswe ngokuya kwamandla we-fiber cores.Amabhokisi wethu wokunqamula akwazi ukufakwa ngezintambo ze-fiber optic, izintambo zama-patch, izintambo zezingulube ngendlela elula.
UJera ucwaninge ngemiklamo eminingi yokuqedwa kwebhokisi le-fiber optic, sizinikele ekuhlinzekeni imikhiqizo ethembekile, ehlala isikhathi eside futhi ebiza kakhulu kumakhasimende ethu. Amabhokisi wokuqedwa kwe-fiber optic kaJera ahlinzeka ngokuvikelwa kwemishini, ukuphathwa nokulawulwa komzila we-fiber.
Sinikeza zonke izesekeli zokwenziwa zokwakhiwa kwenethiwekhi ye-FTTH: I-fiber optic adaptha, intambo ye-fiber optic patch, ukuvalwa kwe-fiber optic splice, ukwehla okokufaka kwekhebula, amabakaki wepali, amabhande wensimbi engagqwali njll. atholakala kulabhorethri yethu yangaphakathi, efana no + 70 ℃ ~ -40 ℃ Ukuhlolwa kwebhayisikili nomswakama, ukuhlolwa kwamandla okuqina, ukuhlolwa kokuguga, ukuhlolwa kwe-IP njll.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane ngalelo bhokisi lokusabalalisa le-fiber optic.
Ibhokisi lokusabalalisa ikhebula le-fiber optic, i-FODB-16X
I-Ftth cable terminal box, i-FODB-16A.1
Ibhokisi lokusabalalisa ikhebula le-fiber optic, i-FODB-2
Fibre optic ikhebula ukuqedwa ibhokisi, FODB-4
Ibhokisi lokusabalalisa le-Fibre optic, i-FODB-6
Ibhokisi lokusabalalisa ikhebula lasendlini, i-FODB-8R
I-Ftth fiber cable faceplate, i-ODP-02
Amasokhethi wokusabalalisa we-Fiber optical, i-ODP-06
Isokhethi yokusabalalisa i-fiber optical, i-ODP-02M
Ikesi lokuvikela i-fiber core, i-PC-1-1